Tuesday, 10 Apr, 2018 11:33 AM
सदावहार गायिका देविका प्रधानको गायनयात्रा करिब ४ दशक पुगिसकेको छ । ‘परदेशी आई सोध्यो मेरो नाम’ बोलको गीत गाएर रेडियो नेपालबाट सांगीतिक यात्रा सुरु गरेकी उनले ११ सयभन्दा धेरै गीत गाइसकेकी छिन् । उनै देविकासँग रेजिना पाण्डेको जम्काभेट:
हालै बुटवलमा एकल गायन यात्रा सम्पन्न गर्नुभयो, आजभोलि धैरै नै एकल साँझ गर्नु हुन्छ नि ?
दर्शक तथा स्रोताहरुको मायाकै कारण एकल साँझ गर्दै आएको हँु । बेलायतमा मात्र ६ वटा एकल साँझ गरे । अमेरिकामा नौ पटक र नेपालमा ६ पटक एकल साँझ गरेकी छु । दर्शकको मायाले नै यो अवसर पाएको हुँ ।
एकल साँझमा नेपालमा स्रोताहरु धेरै कि विदेशमा ?
विदेशमा स्रोताहरु धेरै आउनुहुन्छ । पैसा तिरेर कार्यक्रम हेर्न आउनुहुन्छ, नेपालमा चाहिँ धेरै पासको अपेक्षा गर्नुहुन्छ ।
एकल साँझमा कमाई कस्तो हुन्छ ?
सबैभन्दा ठूलो कुरा हामी जस्तो गायक-गायिकालाई आयोजकले सम्झिएर एकल साँझ कार्यक्रम राखिदिनुहुन्छ । हामी आनन्दले एक थलोमा बसेर गाउन पाउँछौं । त्यही नै राम्रो कमाई हो । काम गरेपछि कमाई त भइहाल्छ । एकल साँझहरुबाट म एकदमै सन्तुष्ट छु ।
अरु व्यस्तता के छन् ?
अन्य गानाहरु रेकर्डमा व्यस्त छु । एउटा हिन्दी गीत पनि गाउँदै छु ।
विगतको तुलनामा आफ्नो चर्चा आजभोलि कम भएजस्तो लाग्दैन ?
हो । सधैँ मैरै मात्र चर्चा भएर पनि भएन नि । नयाँ–नयाँ गायक गायिकाहरु आइरहनुभएको छ । सबैले राम्रो काम गरिरहनु भएको छ तर मलाई लाग्दैन कि मेरो चर्चा निकै कम भयो भनेर । अहिले त म झन देश विदेशसम्म गीत गाउन पुगेको छु ।
नयाँ एल्बमको पनि तयारी गर्नुभएको छ कि ?
छैन । एकल एल्बम निकाल्ने भन्ने सोच मात्र बनाएको छु । अहिले अरु नयाँ पुराना संगीतकार रचनाकारको कलेक्शन एल्बमहरुमा गाइरहेको छु ।
नेपालमा भन्दा कलाकारहरुले विदेशमा सम्मान पाउँछन् भन्ने छ नि हो ?
हो यसमा हामीले धेरै नै खुशी मान्नु पर्छ । एउटा नेपाली कलाकारलाई जहाँ भएपनि नेपालीले माया गर्छ भन्ने यो प्रमाण पनि हो । विश्वभरी भगवान जस्ता स्रोता पाएकोमा गर्व पनि लाग्छ ।
अहिले एउटा गीत गाएबापत कति लिनुहुन्छ ?
२० हजार रुपैयाँ लिन्छु । तर, सबैलाई यही भन्ने हुँदैन । कसैले मेरो बजेट कम भयो भने पनि हेरेर लिन्छु ।
चलचित्रहरुमा चाहिँ तपाईको गीत सुनिन छाडेको छ नि ?
नभ्याएर नै हो । आफ्नै कामहरुमा व्यस्त छु । फिल्महरुमा नयाँहरुले पनि अवसर पाउनुप¥यो नि ।
अरुको गीतहरु चाहिँ कत्तिको सुन्नुहुन्छ ?
सुन्छु भ्याएसम्म । नयाँपुस्ताको गीतहरु सुन्न मलाई साह्रै मनपर्छ । रजिना रिमाल, मिलन अमात्य मलाई अहिलेका मन पर्ने गायिका हुन् ।